Anjerimanontolo Rosiana Saika Hanolotra Mariboninahitra “Doctorat Honoraire” an’i Duterte, Saingy Nandray Sidina Nody Aloha Loatra Lery · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2017 5:18 GMT
Rodrigo Duterte, filohan'i Filipina sy i Vladimir Putin, filoha Rosiana. Loharano: Kremlin.ru
Niomana hanolotra mariboninahitra ‘doctorat’ ho an'i Rodrigo Duterte, ilay Filipiana mahabe resaka, ny iray amin'ireo anjerimanontolo Rosiana malaza indrindra, saingy nandao an'i Rosia talohan'ny lanonana tokony ho natao izy, hoy ireo haino aman-jery Rosiana nitatitra ny Alarobia teo.
Nambaran'ny Ivontoeran-Panjakana Rosiana momba ny Fifandraisana Iraisampirenena (MGIMO), izay ny Ministeran'ny Raharaha Ivelany Ao Rosia no mitantana azy ary heverina ho ny sangany indrindra ho amin'ireo maniry ny ho lasa diplaomaty, fa mety hotolorany ny mariboninahitra ‘doctorat honoraire’ i Duterte ary hanao kabary iray eo anatrehan'ireo mpianatra sy profesora androany (24/05). Kanefa, talohan'ny tokony hisian'ilay hetsika, nanafohy ny fitsidihany i Duterte ary nandray sidina nody rehefa avy nanambara ny lalàna amin'ny tany misy hotakotaka taorian'ny fipoahan'ny herisetra tany atsimon'i Filipina.
Araka ny fanambaràna iray izay efa nofafàn'ilay anjerimanontolo tsy ho ao amin'ny tranonkalany sy ny pejin'ny haino aman-jery sosialiny intsony, saingy mbola azo jerena amin'ny endriny nafenina, “Ny mariboninahitra ‘Doctorat Honoraire’ avy amin'ny MGIMO dia atolotra ireo olom-panjakana, politikìsiana sy olontsotra ary diplaomaty miavaka, ary koa ireo mpikaroka miasa amin'ny sehatry ny fifandraisana iraisampirenena sy ny politika ivelany.” Ireo efa nahazo izany tany aloha dia ahitàna ny filoha frantsay taloha Nicolas Sarkozy, ny filoha Tiorka Tayyip Erdogan ary ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana teo aloha, Ban Ki-moon.
Olona mahabe adihevitra i Duterte, izay efa nampangaina ho nitarika famonoana olona an'arivony maro tsy nandalo fitsaràna fony izy ben'ny tanàna tao Davao City. Hatramin'ny naha-voafidy azy ho filohampirenena tamin'ny taona lasa, nanomboka ady amin'ny zavamahadomelina ny governemantany, izay niteraka fahafatesana an'arivony maro fanampiny.
Tamin'ity herinandro ity i Duterte no tonga tao Maosko hanatanteraka fitsidihana mandritry ny andro efatra izay ampahany amin'ny ezaka iray goavana hikolokoloana fiarahana miasa akaiky amin'i Rosia. Araka ny fampitàna an-tsoratra avy amin'ny fihaonana iray niarahany tamin'i Vladimir Putin natao ny hariva talohan'ny niaingàny, nangatahan'i Duterte i Rosia mba hanome fitaovampiadiana maoderina an'i Filipina hanampiana azy hiady amin'ny Fanjakàna Islamika.
Lasa fanadrohadro ety anaty haino aman-jery sosialy ilay vinavinan'ny MGIMO saika hanolotra ‘doctorat’.
Nanome ‘doctorat honoraire’ ho an'ny filoha Filipiana Duterte ny MGIMO. Ilay olona iray izay nikarakara rà mandriaka sy nitifitra ny vahoakan'ny fireneny.
“Manantena aho fa hahazo ny anjarany koa ry Mengistu Haile Mariam sy Baby Doc Duvalier .”
Fotoana ela izao ny MGIMO no efa lasa toerana fanangonana ny tsy fahalalàna, ny hamaizinan-tsaina ary ny zavatra tsy misy dikany, izay toerana “ianaran” ny zanak'ireo mpangalatra, ny olondoza ary ny mpanao kolikoly.
Tsy mbola mazava raha nomena tamin'ny fomba ofisialy ho an'i Duterte ihany ilay ‘doctorat’ na tsy nisy fanatrehana ny lanonana aza.
03 Janoary 2021Azia Atsinanana